FILE: Pakistan had a 20-run victory over Zimbabwe in their Pool B match at the ICC Cricket world Cup 2015. Picture: ICC-cricket.com.
HARARE - Zimbabwe pulled out of this month's historic cricket tour to Pakistan and then retracted their decision in a bizarre 16-minute turnaround on Thursday.
However, after the news release was issued, the statement was withdrawn and Zimbabwe Cricket spokesman Lovemore Banda told Reuters that discussions were still ongoing.
"The Zimbabwe cricket board has called us and cancelled their tour owing to security reasons and the killings of minorities in Karachi yesterday," Khan told Reuters before adding that Pakistan was trying to persuade Zimbabwe to reconsider.
If the tour goes ahead Zimbabwe will leave on Sunday to play two Twenty20 internationals, starting on 22 May, and a three-match one-day series that begins four days later.